एक छाक खाने खर्च छैन अनलाईनबाट कसरी पढौ सरकार ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/एक छाक खाने खर्च छैन अनलाईनबाट कसरी पढौ सरकार ?
सविता थापा, मैले न त विरोध गर्न खोजे न त आलोचना, ग्रामीण क्षेत्रका बिध्यार्थीहरुमा परेको प्रभाव र मजदुरलाई राहतको व्यवस्थालाई लक्षित गर्दै उल्लेख मात्र गरेकी हुँ । क्षमाप्रार्थी छु सरकार, गरीब मजदुरका छोरा छोरीहरुले अनलाईन बाट पढ्न संभव होला र भनेर सुनाउन मात्र खोजेकी हुँ ।आँखामा भविष्यका सपना र साथमा नोकिया मोबाइल फोन बोकी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागी सहर पुगेको उ माहामारीको बेला पुनः गाउँ पुगेका छ। न त उ सँग नेट चल्नि फोन छ न त उ सँग आर्थिक।
एकछाक खान धौधौ परेको बेला हामी मज्दुर तथा ग्रामीण क्षेत्रका बिध्यार्थी कसरी अन्लाईन कक्षामा सहभागि हुने ? न त सरकारले निःशुल्क डाटा दियो न त राहत। महलमा बसेर कडा नियमको पहल नगर यो अमेरिका होइन। तिमीले गरेको ठुला भाषण र भलाद्मी पाराले देशमा कति र के विकास गरेको रहेछौ एकिन होस्। असी करोडको राहत ककस्लाइ दियौ ? आज पनि जनता त्यहि राहतको आसमा सडकमा लडिरहेका छन्। देशमा संकटकालीन अबस्था छ तिमी एउटा कुर्सीमा लडीहेको छौ । तिमीलाई यो देश र जनताको चिन्ता होइन तिमीलाई तिम्रो कुर्सीको चिन्ता छ ।
धिक्कार छ मेरो देशको शासकलाई तिमी सुरक्षित आफै छैनौं, जनतालाई कसरि सुरक्षा दिन्छौं ?यो गाउँ हो सरकार, कुनै सेवा सुविधाले सम्पन्न भएको राजधानी सहर होइन। नेट्वोर्क टिप्न डाँडामा पुग्नु पर्ने किताब बोकेर काता जाउँ ? नपढौं भबिष्यको चिन्ता छ , पढौं आमालाई औषधि किन्न पैसा हुदैन। फोनमा व्यालेन्स राखेर पढौं की आमालाई औषधी किन्न जाउ, सरकार ?लेखिका सामाजिक अभियन्ता हुन ।ठेगाना: रिब्दीकोट ७ बतासे पाल्पा ।
यी ५ राशिका युबतिले प्रेममा कहिल्यै धोका दिदैनन, पढ्नुहोस
शनिवारको सपिङमा नकिन्नुस् यी ११ वस्तु, अन्यथा हुनेछ हानी
खानासँगै काँचो प्याज खाँदा हुनेछन् यस्ता चमत्कारीक फाईदा
सपनामा मन्दिर गएको दृश्य देखेमा त्यसको खास अर्थ यस्तो हुन्छ